Camaloow Online - News: Odayaasha dhaqanka beelaha waqooyi galbeed somalia ayaa ku hanjabay in ergada shirka dastuurka kala baxayaan hadiii aysan dowladu waxa ka qaban musuq maasuq la sheegay in uu shirka ka jiro.
21 May 2013 23:24:40 Random Media
NASHIIDA YAA DHALIBAA...........
Odayaasha dhaqanka beelaha waqooyi galbeed somalia ayaa ku hanjabay in ergada shirka dastuurka kala baxayaan hadiii aysan dowladu waxa ka qaban musuq maasuq la sheegay in uu shirka ka jiro.
Waxgarad iyo odayaal dhaqamedyo ka soo jeeda gobolada waqooyi ayaa ku hanjabay in ay ergadooda kala bixi doonaan shirka odayaasha dhaqanka ee ka soconaya magaalada Muqdisho hadii an wax laga qaban musuq maasuq ay sheegen in uu ka dhex jiro shirkaas
Odoyaashan, waxgaradkan iyo siyaasiyiintan ka soo jeeda gobolada waqooyi ee dalka Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay si cad u sheegeen in ay qadacayaan islamarkaana ay ergadooda kala baxayaan shirka looga hadlayo arimaha dastuurka ee odoyaasha dhanka Soomaaliyeed uga soconaya magaalda Muqdisho.
Mas�uuliyiintii ka soo qeyb gashay kulankan ayaa waxa ay sheegeen in musuqmaasuq iyo wax isdaba marin lagu sameeyay hanaanka awood qeybsiga beelaha gobolada waqooyi ay ku la haayeen shirka ka socda magaalada Muqdish taasina ay muujineyso in xaqiraad lagu sameeyay beelahaasi.
Idiris Xadi Qalinle oo ka mid ah waxgaradkii ka hadlay kulanka ayaa waxa uu sheegay in hadii dowladda KMG Soomaaliya ay ka fiirsan weyso xaqiraada lagu hayo beelaha ka soo jeeda beelaha waqooyi gabi ahaanba ay qaadacayaan shirkaasi islamarkaana uu san noqondoonin mid miro dhal yeesha oo wax la taaban karo ay ka soo baxaan.
Maxamed Sheekh Ibrahim Tubeec oo isna kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay intiradii loogu talagay beelaha ka soo jeeda gobladda waqooyi in ay uga qeyb galaan shirka odoyaasha dhaqanka ay shaqsiyaad gaar ah oo ka tirsan dowladda KMG ah ay isdaba marin ku sameeyeen sida uu yiri.
Sikastab ha�ahaatee tan iyo markii uu magaalada Muqdisho ka furmay shirka odoyaasha dhaqanka ee looga hadalayo arimaha dastuurka ayaa waxa isi soo tarayay dhaliilaha ay jeediynayaan qaar ka mid ah odayaasha ka qeygalaya shirka beelaha Soomaaliyeed.
· faarax macalin on 15/05/2012 ·
0 Comments · 17857 Reads
Aw Kuuku Garoob Gaad Part 2
Sheeko gaaban oo qosol leh
10,172,902 unique visits